Gcina izinto eziguquguqukayo ngeTI-84 Plus Calculator
Oonobumba be-STO banokujongeka njengolwimi lokuthumela imiyalezo, kodwa isitshixo se-STO sokubala se-TI-84 Plus luphawu olusebenzayo lokuba nalo macala onke. Ukuba ucwangcisa ukusebenzisa inani elifanayo amaxesha amaninzi xa kuvavanywa amabinzana e-arithmetic, cinga ngokugcina elo nani kuguquguquko.
Ukwenza njalo, landela la manyathelo:
Ukuba kukho imfuneko, cinezela  [MODE] ukungena kwiscreen seKhaya.
I-oval emhlophe watson 853
Faka inani ofuna ukuligcina ngumahluko.
Ungagcina inani okanye intetho yezibalo.
g 32 pilisi
Iziphumo zeli nyathelo zibonisiwe kwiscreen sokuqala.
Cinezela [ALPHA] kwaye ucofe iqhosha elihambelana nonobumba okwahlukileyo ofuna ukugcina kuwo inombolo.
Iileta ezisetyenziselwa ukugcina izinto eziguquguqukayo ngoonobumba kunye nonobumba wesiGrike u-theta.
Cinezela [ENTER] ukugcina ixabiso.
Oku kubonisiwe kwiscreen sesibini.
Emva kokuba ugcine inani ngokungafaniyo, ungalifaka elo nani kwinkcazo. Ukwenza njalo, beka isikhombisi apho ufuna inani livele khona, cinezela [ALPHA], kwaye ucofe iqhosha elihambelana nonobumba okwahlukileyo apho kugcinwa inani. Jonga iscreen sesithathu.
Inani oligcinayo ngumahluko ohleliyo ligcinwe kuloo nguqulelo de ube okanye ikhalityhuleyitha igcina inani elitsha kuloo mahluko. Ngenxa yokuba ikhalityhuleyitha isebenzisa oonobumba X, T, kunye ne Greek theat xa isenza imisebenzi yegrafu, ubalo lweparametric, kunye ne-polar equations, kunokwenzeka ukuba ikhalityhuleyitha iyakutshintsha ixabiso eligcinwe kwezi zinto zixabisekileyo xa ikhalityhuleyitha ikwimo yemizobo.
Umzekelo, ukuba ugcina inani kwi-X eguqukileyo kwaye ubuze ikhalityhuleyitha ukuba afumane i-zero yomsebenzi we-graphed XMbini, ikhalityhuleyitha iyakutshintsha inani eligcinwe ku-X ngo-0, uziro ka-XMbini. Kulumkele ukugcina amaxabiso kwezi zinto zintathu ukuba ufuna elo xabiso lihlale ligcinwe emva kokuba wenze imisebenzi edityanisiweyo, ubalo lweparametric, okanye ulingano lwepolar.
fd & c luhlaza 1
Igama lorhwebo lwe potassium chloride
Ngaba ipenicillin inganyanga uti
Ukwenza idome kwi-minecraft
fd & c ebomvu hayi. 40
Kutheni kubalulekile i-valence electron